यिनका सन्तानले पढ्न पाउनुपर्दैन ?
गिट्टी कुटेर छोराछोरीलाई मेडिकल शिक्षा पढाउने चाहना गर्नु भनेको सपना देख्नु हो । तर रामपुर नगरपालिकाका टोपनारायण दम्पत्तिले यसैगरी रातदिन गिट्टी कुटेर र आधाछाक खाएर छोराछोरीलाई मेडिकल, होटल म्यानेजमेन्ट पढाउँदैछन् । यस्ता अरु पनि परिवार छन्, जसले जीवनको लक्ष्य नै छोराछोरीको शिक्ष्ाँ बनाएका छन् र घामपानी, भोकप्यास नभनी काम गरिरहेका छन् ।
साँचो अर्थमा यस्ता कमजोर र्आिर्थक अवस्था भएका तर होनहार यिनका छोराछोरीले इच्छानुसारको विषय पढ्न पाउनुपर्ने हो । समावेशी शिक्षा नीति छैन, शिक्षा व्यापार बनेको छ, शिक्षा माफियाको हातमा छ । शिक्षा सञ्चालकले ठगी खाने बैधानिक उपाय बनेको छ । यसैले देश र विदेशबाट प्राप्त छात्रबृत्तिसमेत धनी, प्रभावशाली र घूस दिनेहरुले लिइरहेका छन् । आर्थिक रुपमा विपन्न बर्गका लागि राम्रो शिक्षा, रोजगारी दिनदिनै असम्भव भइरहेको छ ।
सरकारले सोच्ने यस्तै प्रभावहीन र स्वावलम्बीहरुका लागि हो । यो गरिखाने बर्ग सदैव पछाडि परेको छ । यिनलाई राज्य, शासन, राजनीतिभन्दा पनि हातमुख जोर्ने र दुई चारपैसा जोहो गरेर बालबालिका पढाउने चिन्ता बढी छ । यिनीहरु दिनभर काम गर्छन्, कडा काम गर्छन् र जीवनलाई जोखिममा पारेर जम्मा पारेको सानो पुँजी शिक्षाका लागि लगाउँछन् । साह्रै पीडामा छन् आमसर्वसाधारण । सर्वसाधारणका सन्तान होनहार हुँदैनन् भन्नु गलत हो । होनहार भएर के गर्नु, शिक्षा नीति नै गलत भएपछि यसको मूल्य पहुँच नभएका साधारण जनताले चुकाउनु पर्छ । यो राज्यशोषणको अर्को उदाहरण हो । यस्तो नीतिलाई सरलीकृत गरेर सर्वसाधारणले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा समान अवसर पाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यो सरकार जनताको सरकार हो यसकारण पनि जनअपेक्षा बढी छ र जनअपेक्षा संवोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
महात्मा गान्धीले भनेका थिए– दुर्भावना भनेको मानवताको कलंक हो । हुने र नहुनेवीचको बढ्दो खाडल भनेको दुर्भावना हो, सर्वसाधारणले पढ्ने वातावरण नै नपाउनु दुर्भावना हो, हुने खानेका लागि सबै ढोका खुला हुनु, हुँदा खानेका लागि पढ्ने अवसर र सामान्य उपचारको सुविधा पनि नहुनु दुर्भावना हो, यस्ता र सबैखाले दुर्भावनाहरुको अव अन्त्य गरिनुपर्छ । नेकपाको सरकारले यति गर्न सक्यो भने धेरै ग¥यो । यस्ता आमाबाहरु जो दिनरात गिट्टी कुटेर, भारोपर्म गरेर, भारी बोकेर, ज्यालादारी गरेर छोराछोरी पढाउन चाहन्छन्, पढाउन चाहने र पढ्न चाहनेहरुका लागि सरकारले सुविधा दिनैपर्छ । सकिन्छ भने जनताको सरकारले उच्चशिक्षासम्म निशुल्क गर्नुपर्छ । शिक्षा नै देशको उज्यालो हो, सुशासनको दियो हो । यो अवसरलाई नेकपाले किन उपयोग गरेर सिमान्तकृत बर्गसम्मको धन्यवाद आर्जन नगर्ने ? आखिर काम गरेरै सम्मान आर्जन गर्ने न हो ?